Alakamisy fiakaran’i Jesoa any andanitra – 29/05/2014 – Toriteny – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Vao manomboka ny Envanjely nosoratan’I Md Matio ao @ toko volaohany, dia io no teny mikasika ny ahatongavan’I Jesoa eo ambonin’ny tany. Mifarana ny Evanjelin’I Md Matio ao @toko faha-28 ary ny teny farany dia tenin’I JEsoa: “Indro aho eo aminareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny faran’izao tontolo izao”.
I Jesoa niakatra any an-danitra dia tahaka ireny olona aterina eny amin’ny seranam-piaramanidina.
Rehefa tonga eny Ivato ny olona dia iny ny fiaramanidina miainga ary indro ny fianakaviana manontolo mahita sy mijery hoe iny izy fa lasa.
Dia tsy tahaka an’izay Jesoa.Izy niakatra any an-danitra mba ho eo amintsika mandrakariva, @ fotoana rehetra, @ toerana rehetra. Azontsika alaina sary an-tsaina raha mipetraka @ teny lemaka isika dia ilay olona mitovy amintsika ihany no itantsika, fa rehefa miakatra @ toerana avo anankiray kosa isika dia mitombo ny olona hitantsika. Ary arakaraky ny iakarantsika ambony no mampitombo ny fahitantsika. Ary izay no mahatonga ny eny @ zana-bolana mahita ny zavatra rehetra miseho ety ambonin’ny tany @ antsipirihany. Arakaraka ny hiakarana ambony no ahitana misimisy kokoa.
=> Dia tahaka izay koa Jesoa.
I Jesoa niakatra any an-danitra, fa izy kosa dia eo amintsika mandrakariva. @ alalan’ny Fanahy Masina. Jesoa eo amintsika mandrakariva, fa isika indraindray no tsy mahalala, isika no manontany teno hoe “Ary izaho ve mba eo amin’I Jesoa?”
Nisy tovolahy iray tsy mba mety mivavaka intsony nony nitombo ny taona, kanefa izy taloha dia nivavaka foana. Tsy nety niditra fiangonana intsony ranamana. Dia rehefa mba anontanian’ny ray aman-dreniny ny antony tsy andehanany mivavaka intsony dia avaliny tsotra ny hoe : “Tsy hitako izay tena alehako any, lava be ny fiangonana, mangatsiaka ny andro, sns…” ary mahita zavatra tenenina fona izy. “Ry anona ve no mandeha mivavaka nefa izao ny fiainany”…mahita fialan-tsiny foana.
Dia hoy ny rainy, “avia ianao aty”. Ary nandrehitra afo izy. Dia rehefa nirehitra tsar any kitay dia nasainy naka izay t@ireo kitay nirehitra ny zanany, ary ataovy mitokana ary lavitra ery. Dia nataon’ilay zanany izany.Rehefa napetraka teny lavitra ilay kitay, tsy niaraka t@ireo namany dia maty hoazy.“Fantatrao ny tiako ho lazaina” hoy ny rainy.
Dia tahaka izay koa isika: rehefa eo @ Andriamanitra isika dia toy ny afo mirehhitra. Fa rehefa manalavitra azy kosa isika dia maty.
Andriamanitra dia eo amintsika mandrakariva, fony vao tonga nofo ny teny. Ary ny anarany dia hoe Emanoela, izany hoe eo amintsika Andriamanitra. Ka rehefa mifarana ny Evanjely dia JEsoa miteny hoe : “Indro aho eo aminareo mandrakariva mandrapahatongan’ny faran’izao tontolo izao”. Ka I Jesoa dia eo amintsika isanandro.
Ny vakiteny voalohany dia mitantara, ao @ asan’ny Apostôly, an’I Jesoa miakatra any an-danitra. Niantso ny Apôstôly Jesoa ho eo aminy. Dia avy eo izy nametraka hafatra, tahaka ny lazain’ity Evanjely ity. “Rehefa hidinan’ny Fanahy Masina ianareo ka ahazo hery, dia ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’I Samaria sy Jodea, ka hatrany @ fara-vazantany”. Miandry ny Fanahy Masina isika; rehefa andray ny Fanahy Masina dia ho vavolombeloko.
Ny teny hoe “ ho vavolombeloko” io dia manambara hoe ity Jesoa Kristy ary io tokoa ny tena fiainako.
Raha sendra mba nijery fahitalavitra aho t@alina teo, dia nahita tantara –navehivavy alzerianina. Izy io dia silamo. Fa niova ny sainy. Ny nampiova ny sainy dia ny fahitàny kristianina, miaina, tsara fanahy, tsy mba be fialonana, tsy mba mora tezitra, mihavana @olon-drehetra. Tsy mba miteniteny foana ary manna fanetre-tena goavana.Io no tena zava-dehibe: ilay fanetre-tena nanan’ilay kristianina hitan’ity vehivavy silamo ity.
Dia no nahatonga azy nametraka fanontaniana hoe “Iza àry no mba andriamanitra inoan’io olona io?” satria ny azy dia I Allah sy Mahomé. Ary manontany tena izy ny @ Andriamanitra izay iankohofan’io olon aio mahatonga azy manna toetra tsara tahaka an’io mahate-ho tia ary mahafinaritra ny miara-monina aminy.
Dia nanantona an’il vehivavy kristianina izy ary nanontany. Dia navalin’ilay Kristianina dia hoe : “ny Andriamanitra inoako dia Andriamanitra Fitiavana” Andriamanitra Ray, io no inoako. Dia nanomboka teo dia nifidra, niova ho kristianina ilay vehivavy silamo.Fijoroana vavolombelona no nataon’ity vehivavy ity, noho ny fahitany kristianina niaina ny maha-kristianina azy, ary naharesy lahatra an’ilay silamo ka nahatonga azy niala t@ finoana silamo ka nifindra ho kristianina.
Dia tahaka uzay koa ny tenin’I Jesoa: “rehefa mahazo ny Fanahy Masina ianareo dia ho vavolombeloko eran’izao tontolo izao”.
Dia tohizantsika ny vakiteny voalohany teo. I Jesoa niakatra, nisondrotra nakany an-danitra.
Dia inona no nataon’ny mpianatra?
=> Rehefa niakatra Jesoa dia niandrandra ny lanitra teo ny mpianatra. Variana nijery tany izy ireo, ary rehefa izany dia nisy lehilahy roa niseho.“Ry lehilahy avy any Galilea, nahoana ianareo no mijanona eto mibanjina ny lanitra?” anjelin’ny Tompo ireo niteny t@ireto mpianatra ireto.
“I Jesoa nalaina taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra any an-danitra”. Izany hoe: tsy ampy ny mijanona mibanjina an’I Jesoa fotsiny; tahaka ny ataontsika reefa Alahady: mibanjina an’I Jesoa isika ary mandray Kômonio, dia variana mibanjina eo, arak any hira izay nataontsika teo:
Raha mibanjina ny lanitrao aho ry Tompo, Dia varimbariana izany saiko, Mientan-kafaliana ny fanahiko …
Tsy ampy izay, tsy ampy ny mibanjina ny lanitra, tsy ampy ny mivavaka fotsiny. Fa ity tenin’ireto anjely ireto hoe “nahoana ianareo no mijanona eto … fa mandehana mitory ny vaovao mahafaly, mijoroa ho vavolombelona”.
Tsy ampy ny hoe mivavaka @Andriamanitra, nefa ny fiainana manontolo dia feno fiatsaram-belatsihy, feno avonavona. Ary izay dia iverenantsika ny tenin’ny anjely: “nahoana ianareo no mijanona eto?” Raha toa isika tsy mianaina ny maha-kristianina antsika, fa mivavaka fotsiny aty am-piangonana fa tsy tena mijoro @maha-kristianina antsika, dia miteny amintsika mandrakariva ny anjelin’ny Tompo manao hoe : “nahoana ianareo no mijanona eto?”
Mampatsiaro an’io fijoroana vavolombelona tao @ fahitalavitra io ihany, tantara iray, tantara-na Chène, hazo lehibe, ary azo anaovana fanaka tsara dia tsara.
Tao amina saha iray dia nandalo Andriamanitra, nandeha mba nitsangatsangana. Dia nahita an’Andriamanitra nandeha tao anaty saha ilay hazo lehibe dia nirehareha niteny taminy. Faly izy satria nadalo teo Andriamanitra, ka hoy izy : « Tiako ry Andriamanitra, raha mba ampiasainao aho hanamboaranao ny varavaran’ny lanitra, na ireo seza hipetrahan’ireo olona voafidy any an-danitra – dia hanamboaranao fanaka ao an-danitra ao ».
Fa hoy Andriamanitra namaly azy : « Tsara ny hevitrao, fa aleoko lavitra ianao kapaina atao kitay hanasoavana ny olona, ny fiaraha-monina aminao, hanome hafanana ny olona ».
Fa variana izy, variana @ any an-danitra, fa adinony kosa fa izy anie ka eto ambonin’ny tany eh !
Variana @fiainana lavitra isika, ka hadino ny fiainana eto an-tany. Misy adidy sy andraikitra angatahan’Andriamanitra amintsika.Izay ilay miaina ny maha-kristianiana ary nanafarany ny mpianatra hoe: “rehefa hidinan’ny Fanahy Masina ianareo dia ho vavolombeloko hatrany Samaria, hatrany @ fara-vazantany”. @izay fijoroana vavolombelona izay dia tsy miady irery isika, Jesoa mihitsy no miteny androany hoe: “Indro aho eo aminareo mandrakariva mandrapahatongan’ny faran’izao tontolo izao”.
Isika no miala mandao an’Andriamanitra, fa Andriamanitra dia eo amintsika mandrakariva. Andriamanitra mitady antsika mandrakariva, raha misy olana, na mahafinaritra ny fiainana, mandeha tsar any fiainana, dia eo foana Andriamanitra. Izay koa no lazain’ilay hira manao hoe : “Hay teo foana I Kristy” .
Ao anatin’ireny zavatra manahirana ireny, dia “hay teo foana I Kristy”.
Izy no efa niteny fa ho eo amintsika mandrakariva.
Tsy miady irery isika @izao fiainana izao, misaotra an’I Jesoa isika niakatra any an-danitra, ary izy niakatra any an-danitra dia eo amintsika mandrakariva.